Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-baovao momba ny Reyncarnation an'ny mpanamboatra rako mpamono solika Robert Goddard | Amazon-CEO ary mpandraharaha Espace Jeff Bezos; Miaraka amin'ny fiainana taloha tany Elon Musk - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Notohanana tamin'ny: Fivoriana fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Fiainana taloha an'i Jeff Bezos ho Rocket Engineer Robert Goddard
Jeff Bezos, ilay mpanorina ny Amazon.com, tao 2019 no lasa olona manan-karena indrindra eran-tany. Raha tsapako fa olona mpandraharaha izy, dia gaga aho rehefa nanambara ny fananganana ny orinasan-drariny izy, Blue Origin, ary taorian'izay ny fanolorana azy Blue Moon Tany ho an'ny kolonalin'ny volana.
Taorian'izay dia nanontany tena aho raha toa i Jeff angamba efa niaina nandritra ny androm-piainana rehetra teo amin'ny sehatry ny habaka. Nanam-pahaizana i Jeff Bezos, mpamorona fiaramanidina mitoka-monina, Robert Goddard, na dia tamin'ny fotoana tsy fantatro akory aza ny endrik'Andriamanitra Godard.
Nikaroka ny Internet aho ary na dia tsy tena marina aza, hitako ny fitoviana teo amin'i Bezos sy Goddard. Mino aho fa ny fanahy dia manomana tetikasa momba ny angovo ho an'ny zaza amam-bozaka izay mampiakatra azy. Ity firafitra na angona angovo ity dia mamorona rafitra fombam-pianakaviana, izay mifandanja hatrany amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Io fifandraisana energie io dia manome koa ny famenoana talenta sy talenta velona taloha, ary angamba fahatsiarovana ny fiainany taloha. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Robert Goddard's Development amin'ny maha-mpahay siansa rocket sy futurist habakabaka azy
Rehefa namaky momba an'i Robert Goddard aho, dia nahafantatra fa teraka tany Massachusetts tamin'ny Oktobra 5, 1882, ho an'ny mpamboly iray, Nahum Goddard, ary Fannie vadiny.
Noho ny fanalefahana an'i Amerika tao amin'ny 1880, dia nanjary liana tamin'ny herinaratra, ny teknika ary ny teknolojia ny tanora Robert. Nanjary nalaza tamin'ny fipoahan'ny habaka izy rehefa namaky HG Wells'Classical science fiction Ny Ady Eran-tany, fony izy 16 taona.
Nentin'ny lanitra i Robert ary nanokana ny fiainany izy mba hanamboatra balafomanga izay mety handresy ny tokonam-baravarana.
Robert Goddard no nanamboatra ny sambo fiara voalohany tao amin'ny 1926, izay nitarika ny fiaramanidina maoderina. Maty tamin'ny 1945 i Robert Goddard.
Ny Centre Flight Space Goddard
Na dia tsy nankasitrahany tamin'ny androny aza, tamin'ny 1959, 14 taona taorian'ny nahafatesany, ny NASA dia nanonona ny foibeny teo akaikin'i Washington, DC nanaraka azy:
Spacedraft Space Center
Fitiavan'i Jeff Bezos tany am-boalohany ho an'ny fikarohana sy ny fanjanahana
Jeff Bezos dia teraka tao Albuquerque, New Mexico, tao 1964, mikasika ny 19 taona taorian'ny nahafatesan'i Robert Goddard. Nifindra tany Miami, Florida ny fianakaviany tatỳ aoriana. Nandritra ny sekoly ambaratonga faharoa dia nanatrika ny programa fanofanana momba ny Siansa momba ny Siansa ao amin'ny Oniversiten'i Florida i Jeff
Raha 18 taona izy fony izy taona, tao amin'ny 1982, dia nahazo diplaoma tao amin'ny lisea i Jeff rehefa lasa mpilalao sarimihetsika. Tamin'izany fotoana izany, ny Miami Herald nanadina azy. Ao amin'ny tatitra nivoaka, Bezos dia nitanisa fa te-hanangana zanatany eny an-habakabaka, mba hitahiry ny maha-olona amin'ny tranga mety hitranga eto an-tany. Indray, fony i Jeff Bezos dia 18 taona.
Jeff Bezos nikaroka fikarohana an-habakabaka nandritra ny Oniversiten'i Princeton sy ny fananganana an'i Amazonia
Taorian'ny fianarany tany amin'ny lisea, nankany amin'ny Oniversiten'i Princeton i Jeff tany amin'ny 1986, nahazo mari-pahaizana momba ny teknôlôjia sy ny siansa momba ny informatika izy. Tsarovy fa ny fampiasana an'i Amerika tao amin'ny 1880 dia nitarika ny fahalianan'i Robert Goddard tamin'ny siansa sy ny teknolojia. Raha tao Princeton, Bezos dia filohan'ny Princeton Chapel of the Students for the Exploration and Development of Space.
Miaraka amin'ny fananganana Amazon.com Ao amin'ny 1994, i Jeff Bezos no lasa mpanankarena indrindra eto an-tany.
Jeff Bezos dia manangana orinasa mpikaroka momba ny serasera Blue Origin
Miaraka amin'ny harenany, i Bezos dia nanangana orinasa fiaramanidina, Blue Origin, amin'ny taona 2000, miaraka amin'ny tanjon'ny fanjanahantany toerana. Ny anarana dia manondro ny tany ho toy ny planeta manga izay aterak'izany. Blue Origin dia mpandraharaha lehibe ho an'ny NASA.
Ny Jeff Bezos dia nohamafisina ho teraka tamin'ny fanamboarana indray an'i Robert Goddard
Amin'ny alalan'ity fampahalalana ity dia nanatrika fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson tao amin'ny 2019 aho, izay nanontaniako raha nanana fiainana taloha toa an'i Robert Goddard i Jeff Bezos. Kevin dia fampahalalam-baovao mahazatra izay mampita ny fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay mitatitra fa izy farany no nanjavona teto an-tany mikasika ny 3500 taona lasa izay. Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho nanomboka tamin'ny 2001. Ahtun Re dia naneho tamiko fa manana ny fahaizana mametraka ny fiainany taloha izy ary manana mari-pahaizana ambony.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niaraka tamin'i Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa i Jeff Bezos no teraka tamin'ny taon-dasa tao Robert Goddard.
Elon Musk ho teraka tamin'ny fanamboarana indray an'i Thomas Edison
Mpandraharaha ara-teknika hafa manana fahalianana amin'ny fitrandrahana habaka ny sehatra SpaceX sy Tesla, Elon Musk. Azafady avereno jerena ny:
Fiainana taloha ho an'i Mark Zuckerberg
Mba hamerenana, azafady mankany: Trangam-panjakan-tsolika Herman Hollerith | Mark Zuckerberg
Fiainana taloha ho an'ny mpanorina ny Microsoft Paul Allen sy Bill Gates
Raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao i Bill Gates sy Paul Allen
Ny fitoviana ara-batana amin'ny raharaha momba ny fanambadianas: Na dia tsy marina aza dia misy ny fitoviana amin'ny endrika mampiavaka an'i Robert Goddard sy Jeff Bezos. Ny mahasamihafa azy dia i Jeff dia manana endrika tsy simetrika, izay vokatry ny fivoarany tamin'ny naha-zaza azy. Mino aho fa ny fanahy dia mamolavola modely angovo ho an'ny zaza ao am-bohoka izay mamorona endrika endrika, na dia misy aza ny biolojika sy ny fototarazo dia manova an'io fitenenana io.
Ny fiainana taloha talenta sy ny fitondran-tena: Tena nahafinaritra an'i Robert Goddard sy niboridana tamin'ny hetsi-panoherana, ny fanadihadiana ny habakabaka ary ny fanjanahana ny habakabaka, tahaka an'i Jeff Bezos. Goddard sy Bezos dia samy naneho ny siansa momba ny siansa, matematika ary teknolojia.